Sidee loogu beddelaa qasabadaha jikada?
Bogga ugu weyn / blog / Sidee loo beddelaa tuubbooyinka jikada?
2020 / 11 / 09 Qoondayntablog 14834 0
Haddii aad beddeleyso ama aad rakibayso qasabadda jikada, waa inaad u soo martaa isla qaababkaas. In kasta oo rakibidda qasabadda jikada ay si uun uga fudud tahay beddelkeeda. Laakiin, bedelida qasabada jikada sidoo kale ma ahan wax adag hadii aad taqaanno farsamooyinka.
Si aad u hesho muuqaal casri ah, waa inaad ku beddelataa qalabka jikadaada sida waafaqsan isbeddelka. Taasi waa waxa dadku sameeyaan maalmahan. Tuubada jikada sidoo kale waa mid waligeed la cusbooneysiin karo oo waqti dheer socotana ay ku xiran tahay jikada. Gaar ahaan qasabada qasab qase taasi waxay socotaa ku dhowaad 5-10 sano.
Hadda, sida loogu beddelo qasabadaada matte madow oo cusub oo hoos u soo rida qasabadda jikada? Qodobkaan, waxaan ka sameynay hagitaan sax ah bedelida qasabaddii jikada ee hore. Aynu bilowno uun!
Sida loogu beddelo qasabadda jikada wax lagu buufiyo
Bedelaadda qasabad waa mashruuc horumarineed oo muhiim u ah guriga. Waa wax caadi ah laakiin way ku adag tahay inta badan isticmaalayaasha jikada, gaar ahaan kuwa aan khibradda lahayn. Xaqiiqdu waxay tahay, bedelida matoorka madow ee hoos u dhigaya qasabadda jikada ma ahan wax adag sida ay umuuqato.
Aynu kuu horseedno geeddi-socodka lagu beddelayo qasabada jikada ee lagu buufiyo.
Qalabka ayaa u baahan
Xarig la waafajin karo
Tallaabada 1: Qaado diyaar garow
Labo ama seddex god oo qasab ah ayaan ka shaqeyn doonin saxanka godka keliya. Laakiin, qasabad hal-god ah ayaa si fiican ugu shaqeysa saxanka godka laba-god ah. Ka hor intaadan rakibin, tag hoosta saxankaaga oo hubi inta god ee ay jiraan. Keen qasabadda jikada iyada oo ku saleysan godka saxankaaga.
Tallaabada 2: Demi biyaha
Waa inaad dooratay qasabad aad rakibayso? Hadda, dami biyo-gelinta filtarka hoostiisa ku yaal. Haddii aysan jirin qalab lagu xiro, waa inaad xirtaa dhammaan biyaha ka soo baxa guriga.
Tilaabada 3: Kala qaad khadadka biyo siinta.
Ka fogee khadadka bixinta biyaha tuubada adoo isticmaalaya bambaano la hagaajin karo. Waxay kaa badbaadin doontaa cadaadiska biyaha inta aad beddeleyso qasabadda. Markaad kala bixinayso khadadka sahayda, xasili dhuumaha weelka saxanka hoostiisa golaha wasiirrada.
Tallaabadani waxay meesha ka saari doontaa dhammaan khalkhalka ku jira marinka marin biyoodka. Sidaa awgeed, biyuhu waxay si fudud ugu wareegi karaan khadka saadka.
Tallaabada 4: Ka fur nutska saxanka si aad u soo saarto qasabadda
Waa waqtigii lagaa saari lahaa qasabaddii hore. Marka, fur daboolka miiska jikadaada jikada hoosteeda qaanada daboolka. Hadda, si tartiib ah uga qaad qasabaddaada hore isku xirka saxanka. Ka dib nadiifi qashinka iyo wasakhda dusha weelkaaga.
Tallaabada 5: Isku soo ururi qaybaha xabbada
Ku soo ururi qaybaha tubbada tubbada isku xidha qolka jikada. Raac tilmaamaha ku yaal baakadka. Hadday tahay qasabad hal-gacan ama laba farood oo wax lagu qabto, tilmaamaha ku qoran baakadka ayaa ku tusi doona jihada saxda ah ee dejinta.
Tallaabada 6: Gali qasabadda godka saxanka
Ka dib markaad ku dhejiso qaybaha tuubada isku xirayaasha, ku adkee isku xirka furka hagaajinta. Intaas ka dib, si fiican u geli qasabadda godka saxanka.
Kudar buufin afka qasabada jikada. Ku adkee buufiyaha qasabada iyo tuubada barta la geliyey ee saxanka.
Tilaabada 7: Isku xidhka khadadka biyaha.
Ugu dambeyntii, waxaad ku rakibtay tuubada jikada saxankaaga. Hadda, waxaa la joogaa xilligii dib loo xidhi lahaa khadka biyaha. Ku xir khadka biyo-gelinta bambada la hagaajin karo oo shido biyaha.
Tilaabada 8: Hubi baxsiga iyo cadaadiska biyaha
Waa inaad dhaqaajisaa tuubada isla marka la rakibo ka dib oo aad hubisaa in wax daadad ahi jiraan. Adkee cufka barta isku xira haddii daadku jiro ama carqalad ku timaadda bixinta biyaha.
Xusuusnow, hubinta qasabada ka dib rakibida waa ikhtiyaar laakiin waa hawl muhiim ah in la qabto.
Tallaabada 9: Nadiifi saxanka
Ka dib markaad beddesho qasabadda, waxaad ka heli doontaa burburka saxanka. Nadiifi saxanka saxanka ka hor intaadan isticmaalin tuubada.
Miyay aad u adag tahay in la beddelo qasabad ku jirta saxanka jikada? Maya? Kadib, maxaad sugeysaa? Kaliya raac tilmaamahayaga oo ku beddel qasabaddii hore ee jikadaada adiga oo aan wax caawimaad ah helin.
Isku soo wada duuboo!
Haddii aad wax karisid ama aad maydho alaabta jikada, waa inaad haysataa qasabad jikada oo xoog leh. Tuunbada jikada ee xoogan waa tuubada bixisa qulqulka sare ee biyaha. Tuunbigii hore ee ku jiray jikada ma bixin karo biyaha la doonayo.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in tubbadaadii hore ee jikada lagu beddelo kuwa cusub. Si aad u hesho qasabad jikada casriga ah, waxaan kugula talineynaa inaad doorato qasabada qasab qase Sababta Sababtaas awgeed, waa mid ka mid ah qasabadaha jikada ee awoodda badan leh oo la socda habka rakibidda fudud. Waxaan rajeyneynaa, tilmaamahayagu waxay kuu horseedi doonaan inaad bedesho qasabaddii hore adigoon wax qalad ah lahayn.
Beddel qasabaddii jikada hore iyo cunto karinta faraxsan.
Hore:: Waa maxay sababta qasabadda saxan ee jikada u sameysaa farqi Next: Waa Maxay Nooca Ugu Fiican ee Tuubada Jikada?